Fiantohana fiara | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Afaka manao CTP amin'ny volana 1 ve aho? Azafady mba lazao ahy, na ny fotoana faran'izay kely indrindra
Afaka manao MTPL mandritra ny 1 volana ve aho? Azafady mba lazao amiko na ny fe-potoana farafahakeliny Ny fe-potoana farafahakeliny dia hatramin'ny 20 andro ho an'ny fiantohana fitaterana (ny vidiny dia 20% amin'ny vidin'ny politika isan-taona). Ihany ...
Ilaina ve ny manao CTP amin'ny tantsambo sy fitaovana fambolena hafa?
Adidy ve ny manao OSAGO amin'ny traktera sy ny milina fambolena hafa? compulsory eny Ny fiantohana an-tery dia notondroin'ny lalàna. Raha tsy misy OSAGO dia tsy hisoratra anarana amin'ny polisy misahana ny fifamoivoizana izy ireo. Makà fiantohana mandritra ny 3 volana, ...
Inona no fe-potoana handefasana antontan-taratasy ho an'ny orinasa fiantohana raha misy ny fahavoazana amin'ny CTP?
Inona ny fe-potoana farany fandefasana antontan-taratasy amin'ny orinasa fiantohana raha misy fahasimbana eo ambanin'ny OSAGO? vakio ny fifanarahana raha ny tadidiko dia 5 andro no tadidiko - 15 andro fiasana manomboka ny fotoana nitrangan'ny loza, tao ...
Mamerina ny volan'ny OSAGO?
Azo atao ve ny mamerina vola amin'ny OSAGO? tsy te hamerina ny vola fotsiny ianao ... mitsingevana ny lohany !! ! dia tsy maintsy miverina amin'ny datin'ny fividianana sy fivarotana. Ampy ny kaonty fanampiana. ary raha ny amiko, dia namoaka karatra Rosgostrakh ho ahy ...
Iza ny anaran'ny tanànan'i Tver?
Iza no anaran'ny tanànan'i Tver taloha? Kalinin, nandeha tany amin'ny kilasy 1 KALININ aho, saingy ho an'ity Tver ity dia i Tver ... Tver (amin'ny 19311990 Kali # 769; nin) dia tanàna any Russia, izay ...
Aiza no hividianana CTP amin'ny aterineto? Nankany Rosgosstrakh aho, misy asa mandrakizay any, ao amin'ny RESO koa tsy miasa.
Aiza no hividianana OSAGO an-tserasera? Nandeha tany Rosgosstrakh aho, misy asa maharitra tanterahina, tsy mandeha amin'ny RESO koa izany. Tsy mandeha ihany koa ny gazy Xs CO? Tinkoff Insurance dia natao ho an'ny rehetra ka tsy misy afaka ...
Firy ny seranana any Mosko? Ary inona no antsoin'izy ireo?
Firy ny seranam-piaramanidina any Moskoa? Ary inona no iantsoana azy ireo? 4- Vnukovo, Bykovo, Sheremetyevo, Domodedovo. Hanomboka hiasa ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Zhukovsky amin'ny 20 Jona 2016. Ary andiana miaramila maromaro: Monino, Kubinka, Zhukovsky. SY ...
Azo atao ve ny manoratra fiara tsy misy fiantohana? Ary tsy mahazo polisy ve?
Azoko atao ve ny manoratra fiara tsy misy fiantohana? Ary tsy ho tonga any amin'ny farany ambany ve ireo polisy? Fivarotana karatra fitiliana (fisafoana ara-teknika) Fanaraha-maso ara-teknika an-tserasera Niasa nanerana an'i Russia nandritra ny roa taona mahery izahay ...
Afaka mahazo fiantohana fiara ve aho raha tsy misy mpampiantrano?
Azoko atao ve ny maka fiantohana amin'ny fiara tsy misy tompony? Tsia, tsy hahazo fiantohana ianao raha tsy manana fahefana mpisolovava. Azonao atao ny manao ny hetsika rehetra tsy misy tompona fiara raha tsy amin'ny alàlan'ny fahefan'ny mpisolovava. Tsisy olana. Hiditra ao amin'ny ...
Inona avy ireo tombony omen'ny isa AAA? Ohatrinona? Azafady, azafady .... misaotra
Inona avy ireo tombony omen'ny isa AAA? Ohatrinona? Azafady, azafady .... misaotra arakaraka ny toerana raha any Vyborg dia 20-30 eo ho eo ny renirano. fa tsy miteny aho hoe maka A *** AA, tsara kokoa ny maka mena ...
Inona no atao hoe mpisolovava ankapobeny ho an'ny fiara? Ary inona ny zon'ny olona manana an'ity fiara ity?
Inona ny fahefana ankapobeny ho an'ny mpisolovava? Ary zon'ny olona inona io fiara io? efa tsy mila tafiditra ao anaty fiantohana toy izany! fahefana ankapobeny ho an'ny mpisolovava na notarized, ho toy ny foto-kevitra ...
tratry ny loza Nisy fitsarana iray nanaiky ny fanitsakitsahana ny fifanarahana. iza no handoa ny simba?
sendra lozam-pifamoivoizana ... nisy ny fitsarana, ekena fa fanitsakitsahana samy izy. iza no handoa ny simba? Raha misy ny lesoka ataon'ireo mpamily amin'ny lozam-pifamoivoizana dia 50% amin'ireo fahasimbana nateraky ny fiara no iharan'ny fanonerana ara-bola. Satria ny…
OSAGO mitatra - inona izany?
OSAGO mitatra - inona izany? raha diso ny lozam-pifamoivoizana ary mihoatra ny fetra fandoavam-bola 120t. R. dia aloavy ny tsy fitoviana fa tsy avy any am-paosy. fa avy amin'ny fanitarana. Manoro hevitra aho, tsara ...
Ingosstrakh dia nanaisotra ny fandoavana ny OSAGO
Ingosstrakh dia nanambany ny fandoavam-bola amin'ny fiantohana an-tsokosoko amin'ny motera fahatelo Azo atao tsara ny mahazo ny vola, saingy asa tsy misy fisaorana ny fiaraha-mientana amin'ny vesatry ny fitsarana irery. Efa niaina zavatra toy izany aho, tsy mila famerimberenana intsony. ...
Lazao ahy ny santionan'ny mpampihorohoro tsotra iray nosoratana mba hialana amin'ny fiantohana fiantohana
Omeo santionany amin'ny fahefan'ny mpisolovava an-tanana mba hampidirina ao amin'ny fiantohana CTP Tsy mila fahefan'ny mpisolovava ianao hiditra amin'ny fiantohana. Ny tompony no hiditra ao anatiny. nandeha tany Yandex ary nanoratra “santionan'ny fahefana mpisolovava an-tànana tsotra ...
inona no sazy raha tsy misy fiantohana fiara
onitra inona raha tsy misy fiantohana amin'ny fiara dia 800r isaky ny fijanonan'ny polisy misahana ny fifamoivoizana hoy aho hoe aleo mandeha mpandeha an-tongotra) marary ianareo mpamily. Ny metro TV dia azonao atao ny mifankahalala amin'ny tovovavy mamaky ny vavahady kntgut ...
Inona ny politika DPP, ary inona no atao?
Inona no atao hoe politika DGO, ary inona no ilana azy? Ny DGO dia fanitarana ny fetran'ny andraikitra amin'ny fiantohana ara-tsosialy sivily, izany hoe, raha te hanitatra ny fandoavam-bola ianao noho ny hadisoanao avy amin'ny 140 ...
Iza no nanao fanadihadiana mahaleotena taorian'ny loza?
Iza no nanao fanadinana tsy miankina taorian'ny lozam-pifamoivoizana?! Amin'izao fotoana izao dia tsy misy olana amin'izany. Eo anilan'ireo niharam-boina ny fitsarana ary miverina amin'ny tsy fandoavan-ketra, zavatra very ary zavatra mahafinaritra hafa. ...
Ohatrinona ny manoratra ny olona iray amin'ny fiantohana?
Ohatrinona ny miditra amin'ny fiantoham-piainan'ny olona iray? miankina amin'ny traikefa fotsiny, fa amin'ny horsepower ihany koa, ary tsy tokony maka fahazoan-dàlana hipetraka ianao raha efa za-draharaha koa ny mpamily ary ny mpiara-miasa aminy dia ...
inona no hatao raha mivarotra fiara ianao, manoratra fifanekena amin'ny varotra, famantarana ao amin'ny PTS,
inona no hatao raha mivarotra fiara ianao, manorata fifanarahana fividianana, sonia amin'ny TCP, Raha mpivarotra ianao. 1. Manaova sonia ny fifanarahana fivarotana sy fividianana fiara amin'ny kopia 3, iray ho anao ary roa ho an'ny mpividy. ...
77 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,776.